१० अर्बको खै भन्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : १० अर्ब तल पठाइयो ! « Sansar News
१० अर्बको खै भन्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : १० अर्ब तल पठाइयो !
४ असार २०७७, बिहीबार १५:२९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्चिएको पैसामाथि गरिएको प्रश्नप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्चिएको पैसामाथि अनावश्यक प्रश्न गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाउन सजिलो भएको भन्दै कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा गरिएको व्यवस्थापनलाई हेर्न आग्रह गरे । बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले १० अर्बको खर्च तल्लो निकायमा गएर हेर्न सुझाव दिए ।
उचाल्नेलाई त उचाल्न सजिलो छ, १० अर्ब कहाँ गयो भनेर । खै १० अर्ब भनेर । अब यहाँ १० अर्ब, कताबाट देखाउने यहाँ छ भनेर । १० अर्ब त तल पठाइयो ।
‘उचाल्नेलाई त उचाल्न सजिलो छ, १० अर्ब कहाँ गयो भनेर । खै १० अर्ब भनेर ।’ उनले भने, ‘अब यहाँ १० अर्ब, कताबाट देखाउने यहाँ छ भनेर । १० अर्ब त तल पठाइयो ।’
उनले १० अर्बबाटै महिनौंदेखि कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा काम भईरहेको जिकिर गरे । ‘यहि कामको लागि महिनौंदेखि मानिसहरु खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई ख्वाएका छन्’, उनले भने ।
उनले खर्चको हिसाब महालेखा र आन्तरिक लेखा परिक्षणले हेर्ने भन्दै अनावश्यक प्रश्न गरिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मान्छे काममा लागेका छन् । केहीलाई खर्चको हिसाब चाहिएको छ । परिस्थितिको गम्भीरता छैन ।’